Mitadiava torolàlana vitsivitsy hahazoana fanajana ny alika | Tontolo alika
Mahazo fanajana ny alika Mitranga izany amin'ny fananana biby mahay mandanjalanja ary nampianatra tsara koa isika. Ny alika dia tsy afaka manaikitra ny tompony ary tsy tokony hanohitra izy ireo rehefa miteny zavatra amin'izy ireo izahay, satria hita fa tsy raisin'izy ireo ho mpitarika izahay. Na izany aza, mila fotoana sy ezaka ny fahazoana an'io satanasa io.
Misy firazanana sasany izay tsy isalasalana fa mora kokoa ny mampiofana ary mampiseho fanajana be ny azy ireo izy ireo. Na izany aza, amin'ny hafa dia hanana asa bebe kokoa isika, toy ny tranga tany avaratra, izay tena mahaleo tena ary mety tsy hitandrina ny tompony.
1 Inona no atao hoe fanajana?
2 Mamorona rohy
3 Fampianarana sy fifehezana
4 Mianara miaraka amin'ny lalao
5 Ora fisakafoana antoandro
Inona no atao hoe fanajana?
Rehefa miresaka fanajana isika dia miresaka biby fiompy izay manisy fiheverana ny mahasoa ny tompony ary mihevitra azy ho mpitarika azy koa. antsika maneke rehefa manome baiko Ary ankoatr'izay, tsy hiampita fetra velively toy ny fihetsika ratsy miaraka amintsika izany. Ny alika manaja antsika dia mamela antsika hihinana ny sakafony amin'ny fotoana rehetra, tsy mampiseho ny nifiny na mampiseho fihetsika manjakazaka ary manoa. Fa ny famoronana an'io fatorana io sy io fanajana io dia mitaky fotoana.
Raha efa nanana biby fiompy ianao dia ho fantatrao tsara izay lazainay. ny fatorana dia tena zava-dehibe, satria fifandraisana manokana eo amin'ny alika sy ny olombelona. Arakaraka ny fotoana iarahantsika miaraka, vao mainka mifankahazo isika nefa tsy mila miteny, miaraka amin'ny famantarana fotsiny, ary vao mainka miray saina. Ny famoronana ity fatorana ity miaraka amin'ny biby fiompinay dia manome antoka antsika ny fifanajana ny filan'ny hafa. Ho fanampin'izany, ny biby fiompintsika dia hahatakatra ny toe-tsaintsika ary hitandrina bebe kokoa.
Fampianarana sy fifehezana
Amin'ny fiainan'ny alika tsy maintsy misy ny fanabeazana sy ny fifehezana. Io no fototra hananany fanajana fa tsy hanao zavatra manimba antsika, toy ny fitsakoana fanaka, na ny tsy fankatoavana sy ny fieboeboana. Betsaka ny alika manana toetra matanjaka, izay mahatonga azy ireo hatanjaka kokoa. Amin'ity karazana alika ity dia tsy maintsy miasa bebe kokoa amin'ny fifehezana isika, satria momba ny biby izay mino fa ambony noho ny tompony izy ireo, tsy manaja ny baiko omena azy. Ny alika dia tsy maintsy mahatakatra fa isika no nametraka ny tondrozotra. Miaraka amin'ireo alika ireo dia mila miasa isan'andro ianao amin'ny fampianarana tsara. Mila manome valisoa azy ireo ianao rehefa manao izay andidianay. Ny fifehezana sy ny fankatoavana dia miasa isan'andro miaraka amin'ny alika.
Mianara miaraka amin'ny lalao
Ny lalao dia mety ho a fomba tsara ho an'ny alika, ka afaka manararaotra azy io koa isika. Ny filalaovana ilay alika dia manampy azy roa hanatsara ny fatorana ary koa fomba iray hianarany. Ny lalao tsotra toy ny manipy ny baolina dia afaka mampianatra azy ireo haharitra kokoa sy hihaino antsika rehefa angatahinay izy ireo hamerina ny baolina. Ho fanampin'izany, ny fampihetseham-batana dia manampy amin'ny famoronana alika mahay mandanjalanja kokoa, satria manatanteraka ny fanatanjahantena ilaina mba hampidinana ny haavon'ny angovo isan'andro. Aorian'ny fizarana angovo tsara dia ho mora amin'ny alika ny fiofanana.
Ora fisakafoana antoandro
Ity dia iray amin'ireo fotoana marefo indrindra ananantsika miaraka amin'ny biby fiompinay. Ny fotoam-pisakafoanana ho azy ireo dia tena zava-dehibe ary misy ny alika izay tena tompony sy faritany miaraka aminy. Raha manaja antsika izy, ny alika hiala eo izy rehefa miteny azy isika, na dia eo aza ny fitadiavana sakafo. Tsy maintsy ampiharina izany satria mbola kely izy ireo, mba hialana amin'izy ireo amin'ny fihetsika ratsy na hanjary manjakazaka amin'izany. Tsy maintsy ataonao miandry izy ireo alohan'ny handroahana azy io, ary ny fampiharana isan'andro dia tsy maintsy tratra. Hijoro eo alohan'izy ireo izahay ary hampipetraka azy ireo hipetraka. Apetratsika eo alohan'izy ireo ny vilany hanakanana azy ireo raha mihetsika hihinana azy izy ireo. Zava-dehibe ny tsy hanombohan'izy ireo misakafo raha tsy asaina manao izany. Ity fihetsika ity dia midika fanajana sy fankatoavana ny tompony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fomba ahazoana fanajana alika
Olana amin'ny fitondran-tena amin'ny alika mitafy vozona